မိမိကိုယ်ကို ကူးစက်ခံရပြီလို့ သံသယရှိရင် အခမဲ့သွားရောက် ပြသနိုင်တဲ့ ဆေးခန်းများ - Zet Star
မိမိကိုယ်ကို ကူးစက်ခံရပြီလို့ သံသယရှိရင် အခမဲ့သွားရောက် ပြသနိုင်တဲ့ ဆေးခန်းများ
ကိုယ်ကိုကိုယ် Covid19 လို့ သံသယရှိရင် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံးများကို မသွားပဲ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ Fever Clinic များကို သွားပါ အချိန်စာရင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊လိပ်စာများပါ
1. တာမွေမြို့နယ် အချိန် ….. မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီ နေရာ….. အမှတ်၃၇/၃၇ ဦးထွန်းမြတ်လမ်း၊ဗညားဒလလမ်းထောင့်(ရတနာမြိုင်ကွန်ဒို) ဆေးခန်းဖွင့်ရက်…. တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ တာဝန်ခံ ဆရာဝန်- ဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်း( 095127449)
2. မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အချိန်……. မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီ နေရာ…….. မြယာကုန်းလမ်းမပေါ် ရှိ ဧရာဝတီဘဏ်ဘေး၊ အရင် 21st Century City Mart ရှေ့၊ ကျန်းမာရေးဌာန ၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်။ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်…. တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ဒေါက်တာကိုကိုထွေး( 09253999600)
3. ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် အချိန်…… ၂၄ နာရီ နေရာ…… အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံ(ဂန္ဒီဆေးရုံ) တာဝန်ခံ ဆရာဝန် -ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသက်ထွန်းချစ်၊ ဒေါက်တာနေမင်းထက်( 095044868)
4. လှိုင်သာယာမြို့နယ် အချိန်……. မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၁ နာရီ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်… စနေ နေရာ….. ဒေသန္တရဆေးခန်း မန္တလေးလမ်း ၁၂ရပ်ကွက် အထက ၂ကျောင်းအနီး တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ဒေါက်တာနိုင်မင်းထွဋ်( 09963525140)
5. အင်းစိန်မြို့နယ် အချိန်…… မနက် ၉ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ နေရာ…. အင်းစိန်မြို့တော်ခန်းမ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်….. တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊ကြာသပတေး၊သောကြာ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်မာမာကြည်၊ဒေါက်တာ သောင်းလင်း ( 09260206401)
6. အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် အချိန်……. မနက် (၈) နာရီ မှ (၁၀) နာရီ နေရာ…….. ထ/၁၄ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း ၇ ရပ်ကွက် ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် (ဂိတ်ဟောင်းမှတ်တိုင် နှင့် စျေးလမ်းမှတ်တိုင်ကြား) ဆေးခန်းဖွင့်ရက်… တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ဒေါက်တာရဲညီညီထွဋ် ( 09972555220)
7. ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် အချိန်……. မနက် ၈ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ နေရာ……. ရွှေပြည်သာမြို့တော်ခန်းမ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်…. အင်္ဂါ၊ကြာသပတေး၊စနေ၊တနင်္ဂနွေ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ဒေါက်တာသစ်လွင်( 09450013533)
8. တောင်ဒဂုံ မြို့နယ် အချိန်…..မနက် ၈ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ နေရာ…..စု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံ(တောင်ဒဂုံ) အမှတ်(၁/က)ဇေယျာမြိုင်လမ်း(၅၄)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ဆေးခန်းဖွင့်ရက်….အပတ်စဉ်-တနင်္လာ-ဗုဒ္ဓဟူး-သောကြာ-တနင်္ဂနွေ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ဒေါက်တာ ဇော်လင်းဘို( 095086538)
9. တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အချိန်…..မနက် ၉ နာရီမှ ၁၂ နာရီထိ ဆေးခန်းလိပ်စာ……..တောင်ဥက္ကလာ ၁၀ရပ်ကွက် ဇေယျလမ်း ဟေမဝန်ဓမ္မာရုံဝင်းထဲ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်…. သောကြာ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ဒေါက်တာဉာဏ်လင်းမြင့်ထွန်း( 095198814)
10. ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အချိန်…… မနက် ၉ နာရီ မှ ၁၂ နာရီ ထိ နေရာ……. မဟာပုညောပကာရဓမ္မာရုံ၊ကျောင်းကြီးလမ်း၊အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်… ဗုဒ္ဓဟူး၊စနေ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ဒေါက်တာ အောင်မွန်ကျော်( 09421137517)
11. မှော်ဘီ မြို့နယ် အချိန်….. နံနက် ၉ နာရီ မှ ၁၁ နာရီထိ နေရာ…… အားကစားခန်းမ၊မှော်ဘီ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်….. အပတ်စဉ်-အင်္ဂါ တာဝန်ခံ ဆရာဝန်- ဒေါက်တာ ကျော်လင်းထွန်း (09972021450)
12. ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ခေတ္တယာယီ ပိတ်ထားပါသည်။လိုအပ်ပါကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ဒေါက်တာ ရဲမောင် (09261957090)
13. ရန်ကင်း မြို့နယ် အချိန်…. မနက် ၉:၃၀ မှ ၁၂ နာရီ ထိ နေရာ…. မိုးကောင်းကျောင်းတိုက်ဝင်း၊ရန်ကင်း ဆေးခန်းဖွင့်ရက်….အပတ်စဉ်-တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊စနေ တာဝန်ခံ ဆရာဝန်….ဒေါက်တာ အိအိခိုင် (09978807029)
14. လှိုင် မြို့နယ် အချိန်…..မနက် ၈ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ ထိ နေရာ….. အမှတ် (၅) ရပ်ကွက် အပိုင်း(၂)၊ ခရေ(၄)လမ်း၊ဓမ္မပါလကျောင်းတိုက်ဘေး၊ အ.မ.က (၂၆) လှိုင်မြို့နယ်။ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်…..အပတ်စဉ် – တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ ဆေးခန်း တာဝန်ခံ- ဒေါက်တာ အောင်မော်မင်း( 0943067059)
15. သာကေတမြို့နယ် အချိန်…… မနက် ၉ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ ထိ နေရာ…. မိုးလုံလေလုံ အားကစားရုံ၊သာကေသမြို့နယ် ဘောလုံးကွင်း(စာတိုက်မှတ်တိုင် အနီး) ဆေးခန်းဖွင့်ရက်….အပတ်စဉ်-အင်္ဂါ၊စနေ တာဝန်ခံဆရာဝန်….ဒေါက်တာ မြတ်မိုးလွင် (09425306298)
16. မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် အချိန်….မနက် ၉ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ ထိ နေရာ…. မြောက်ဥက္ကလာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ဆေးခန်းဖွင့်ရက်….အပတ်စဉ်-တနင်္လာ မှ သောကြာ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် – ဒေါက်တာစိုးဝေဖြိုး( 09960197369)
17. မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အချိန်…. မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ထိ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်….. အင်္ဂါ၊စနေ နေရာ… ကျိုက်ဝိုင်းဘုရား ၊ဘောလုံးကွင်း အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။ တာဝန်ခံဆရာဝန်- ဒေါက်တာရဲလင်းစိုး( 09773030870)
18. တွံတေးမြို့နယ် အချိန်…. မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ထိ ဆေးခန်းဖွင့်ရက်….. တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ နေရာ… သာသနာ့ဗိဗ္မာန် တွံတေးမြို့ တာဝန်ခံဆရာဝန်- ဒေါက်တာကျော်ဇင်ဦး(0943083337)
19. ခရမ်းမြို့နယ် ခေတ္တယာယီ ပိတ်ထားပါသည်။လိုအပ်ပါကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။ တာဝန်ခံ ဆရာဝန်….. ဒေါက်တာ ဇော်ဝင်း(09965530919)
20. သန်လျင်မြို့နယ် အချိန်…. မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၃ နာရီ နေရာ…. သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တာဝန်ခံဆရာဝန်…. ဒေါက်တာမြကြေးမုံ(09452293526)
Ma Wyne Pye
← “မောင်မောင်ခေါ်တုန်း ဗျာ ထူးကြပါ အောင်ကျော်ခေါ်မှ ဗျာ မထူးကြပါနဲ့”
ကဲ စလာပါပြီ။ ဒီလိုဖျက်လိုဖျက်ဆီးနဲ့ စည်းကမ်းပျက်တာက မြန်မာ့စိတ်ရင်းများ ဖြစ်နေပြီလား? →